Sheekada Caruurnimada ee Gianluigi Buffon iyo Wacdiyooyinka Aan Laheyn
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Talyaaniga Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Stop Stopper ugu fiican ee ay yaqaanaan magaca; "Gigi, Superman". Dabeecadda iyo Habdhaqanka Caruurta Gianluigi Buffon Xaqiiqooyin waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch oo aan run ahayn oo la yaqaan ee isaga ku saabsan.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa laakiin qaddar yar ayaa tixgeliya LB Buffon Biography oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Nolosha Hore
Gianluigi Gigi Buffon wuxuu ku dhashay maalintii 28 ee Janaayo 1978, Carrara, Italy waxaa u dhashay Maria Stella Buffon (hooyadii) iyo Adriano Buffon (aabbe).
Taageeraha halyeeyada Talyaaniga wuxuu ku dhashay qoys qani ah oo ah ciyaartoy talyaani ah. Hooyadiis, Maria Stella, wuxuu ahaa aabe rikoodh iyo aabihiis, Adriano, oo ah culeys weyn oo talyaani ah.
Sida cunuga guriga, Gigi wuxuu ku raaxeystey xiriir wanaagsan oo uu la leeyahay waalidkiisa, gaar ahaan hooyadiis oo dabiiciga ah u lahaa ilmo jilicsan. Hoos waxaa ku qoran sawir buug carruureed Buffon oo ay ku dhalatay hooyadiis dhalashadiisa.
Little Gianluigi Buffon iyo Hooyo (Maalintii dhalashadiisa)
Buffon wuxuu soo bandhigay jilitaankiisa ciyaaraha fudud sida cunug, oo dhan ku mahadnaqaya waalidkiisa ciyaaraha fudud.
Inkastoo uu jahwareer hor leh ku reebay isboortiga, wuxuu wadnaha raacay kubada cagta. 6 sano jirkan, Buffon ayaa waalidiintiisa ku soo qoray iskuulka Canaletto di La Spezia ee kubada cagta halkaas oo uu si wacan u bilaabay mustaqbalkiisa kubada cagta.
Sheekada Buffon Sheeko Xeel dheer -Soo-koobidda Xirfadaha
Xaqiiqda waa la sheegi karaa. Gigi ayaa ku soo bilowday isagoo ah ciyaaryahan khadka dhexe ah, waligiisna ma ahan goolhaye. Tani waa isku mid David De Gea. Beow waa sawirka Buffon markii uu ahaa ciyaaryahan khadka dhexe ah.
Young Buffon oo ah xiddiga khadka dhexe
Waxa uu ciyaaray kulankiisii ​​ugu horeeyay ee San Siro ee 10 ee sanadkan tartanka loogu jiro ciyaartoyda dhalinta yar ee reer Veneto. Labo sanno ka dib, Buffon wuxuu ogaaday inuu sanamkiisa, goolhayaha Cameroon ah Thomas N'Kono, oo ciyaaray koobka 1990 World Cup.
Sheekada Buffon ee Idol-Thomas N'Kono
Thomas wuxuu mas'uul ka ahaa booska Buffon ee bedelka ciyaaryahanka khadka dhexe ilaa goolhaye. Dhammaan talyaaniga ayaa weli ku leh lacag go'an.
Buffon ayaa kulankiisii ​​ugu horeysay u ciyaaray ka dib markii labada goolhaye ee kooxda koowaad ay dhaawacyo soo gaareen. Ka dib labo asbuuc oo uu soo jiitay taageerayaasha, waxa uu noqday xiddig joogta ah islamarkaana aan ku barokicin kaliya hal kulan, lakiin labo goolhaye oo heer sarre ah oo kooxdiisa ka tirsan. Wuxuu ahaa 16 da 'xilligan.
Guuldaradii ugu weyneyd ee goolhayaha Talyaaniga ee Parma ayaa yimid xilli ciyaareedkiisii ​​afaraad ee kooxda, markii uu ku guuleystay Coppa Italia iyo UEFA Cup. Xilli ciyaareedkan ayaa yimid waqtigii uu Parma u ciyaaray sida Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Lillian Thuram iyo Fabio Cannavaro. Ka dib labo xilli ciyaareed oo cajiib ah oo uu ku qaatay jaalaha iyo buluug, Buffon waxaa loo wareejiyay Juventus si uu uhorsho 50 million euros (rikoor goolhaye ah waqtigaas).
Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta Leh -Nolosha Qoyska
Ciyaaraha Talyaaniga ayaa si wanaagsan loo bixiyay sanadihii la soo dhaafay. Haysashada hooyo iyo aabe oo isboorti u sharraxan macnaheedu waa ka soo jeeda qoys hodan ah. Tani waa kiiska Gianluigi Buffon. Halkan, waxaan ku siineynaa aragti waalidiinta Gigi.
GABAAN: Buffon aabihiis, Adriano Buffon wuxuu ahaa nin culus. Wuxuu ku dhashay 15th Sep 1945 ee Latisana, Talyaaniga waxaa soo saaray Masocco Giorgio (aabaha) iyo Paolini Teresa (hooyo). Hoos waxaa ku qoran sawirka dhalinyarada Adriano.
Gianluigi Buffon's Father - Adriano Buffon
Ka dib markii uu ka fadhiistay ciyaaraha fudud, Adriano wuxuu u shaqeeyey macalinka PE.
HOOYO: Hooyadii Gigi, Maria Stella Buffon waxay ahayd gabar fardaha ah oo sidoo kale matala Italy heer qaran. Waxay ku biirtay ninkeeda si ay u shaqeyso macalinka PE ka dib hawlgalkeeda.
Gianluigi Buffon's hooyadiis - Stella Maria Buffon
Hoos waxaa ku yaala sawir casri ah oo googo ah oo ka mid ah waalidiinta ciyaaraha fudud ee Gigi, Mr iyo Mrs Adriano Buffon.
Maalinta hadda muuqata ee waalidiinta Gianluigi Buffon
KOOXAHA KOOXAHA: Gigi waa wiilka kaliya ee qoyskiisa. Gandi Buffon waa gabadha ugu weyn Gigi. Waxay ku dhalatay 1973. Hoos waxaa ku yaal sawirka iyada iyo walaalkeed iyo gabadh talyaaniga ah 'Gigi'.
Gandi Buffon iyo Walaalkeed Gigi
Hoos waxaa ku yaal sawir Buffon Sister, Veronica Buffon. Waxay ku dhalatay 1975. Veronica Buffon wuxuu ciyaaray kubadda laliska kooxda kubadda cagta ee Talyaaniga.
Wigan gabadha ugu dhow ee gigi-Veronica Buffon
UNCLE: Gigi Buffon wuxuu leeyahay adeer la yiraahdo Dante Masocco. Wuxuu ahaa ciyaaryahankii kubada kolayga ee Serie A1, oo sidoo kale matalay xulka qaranka Talyaaniga.
Gigi Buffon adeerkiis, Dante Masocco
XADGUDUB: Halyeeygii hore ee Inter Milan iyo Talyaaniga Lorenzo Buffon waa ina adeerkiis Gianluigi Buffon.
Buffon oo ah wiilka Buffon -Lorenzo Buffon
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
Gigi waa mid hodan ah oo qurux badan. Tani waxay micnaheedu tahay in ay jirto xaalad cakiran oo xiriir la leh noloshiisa oo dhan. Waxaan kuu soo bandhigaynaa, faahfaahinta nolosha xiriirka uu la leeyahay.
Sheekada jacaylka Gigi Buffon ayaa dib usoo ceshatay 2005 markii uu la kulmay jacayl Alena Seredova. Alena wuxuu ahaa kiisii ​​ugu horeeyay ee jimcaha Miss Czech Republic ee 1998 iyo wakiilkiisa waddanka Miss World 1998.
Gigi Buffon iyo Alena Seredova
Gigi wuxuu guursaday Alena Seredova bishii June 16, 2011, Prague. Waxay haystaan ​​laba carruur ah, Louis Thomas (wuxuu dhashay 2007) iyo David Lee (wuxuu dhashay 2009).
Gigi iyo caruurtiisa, Thomas (midig) iyo David (bidix)
Ilmihiisa kowaad 'Thomas' ayaa lagu magacaabay Gigi Buffon ee ahaa ninkii Thomas N'Kono. Wuxuu ka dhigaa waqti uu kula ciyaaro labada wiil. Tani waxay si weyn u dhacdaa inta uu ku maqan yahay fasaxa.
Maajo 2014, Buffon wuxuu ku dhawaaqay inuu furi doono xaaskiisa. Waxay kala go'ay saddex sano kadib guurka.
Waxa uu si deg deg ah ula xiriiray jimicsiga Talyaaniga, saxafiga iyo telefishanka Ilaria D'Amico.
Sida laga soo xigtay majaladda Italy, Buffon iyo D'Amico waa "Sida bakaylaha" iyo deriska ayaa billaabay inay ka cabanayaan qeylada jacaylka.
2015, Buffon wuxuu ku dhawaaqay in lamaanahaasi ay filayeen in ay cunug wada joogaan. On 6 Jannaayo 2016, lamaanayaasha ayaa ku dhawaaqay dhalashada wiilkooda Leopoldo Mattia on Twitter horaantii fiidkii.
Xagaagii xagaaga ee 2017, ayaa labadan lamaane noqday. Ka hor inta uusan xiriirkiisa iyo guursanin Šedová, Buffon ayaa sidoo kale horey ugu soo jiiday kooxdii isboortiga qaranka ee Italy, Vincenza Calì.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -2003 / 2004 Xilliga
2013, Buffon ayaa shaaca ka qaaday inuu ka soo gaaray murugada xilli ciyaareedkii 2003-04, ka dib markii Juventus ay rigooreyaal kaga badisay finalka Champions League, taasoo ka dhigeysa natiijada xun ee Juventus xilli ciyaareedkan.
Buffon wuxuu si joogta ah u booqday takhtar cilmi-nafsi, laakiin wuxuu diiday inuu daawo qaato, wuxuuna ka adkaaday niyadjabkiisa ka hor Euro 2004
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Ganacsiga Wine
sida Andrea Pirlo iyo Andres Iniesta, Buffon ayaa sidoo kale ka dhigaya hal galaas oo khamri ah sida kuxusta sawirka hoose.
Laga soo bilaabo Gigi Buffon ilaa Wesley Sneijder, Ivan Zamorano: Horyaalka kubada cagta ee maanta ayaa arkay magacyadooda ku jira dhalada khamriga sida calaamadaha.
Ugu dambeyntii 2017, Buffon wuxuu ku bilaabay magaciisa "Buffon # 1".
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -A Friend to Pope
Buffon waa kaniisad diimeed. Waa saaxiib fiican Pope Francis. Labada lamaane waxay ku kulmeen 2013 iyagoo dalladda kubadda cagta iyo diinta.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Habka Play iyo Reception
Ilaa iyo markii uu ku soo baxay ciyaartoyda dhalinyarada ah, Buffon ayaa loo caleemo saaray qaab ciyaareedkiisa joogtada ah ee xirfadiisa ciyaareed. Halyaygii ayaa ammaanay tababarrada, ciyaartoyda, iyo sidoo kale labada ciyaaryahan ee labada kooxood iyo kuwa kaleba. Tani waa feejignaankiisa iyo xasiloonida, iyadoo cadaadis la saarayo, iyo sidoo kale heerka shaqada, iyo muddada dheer.
Waxaa inta badan loo tixgeliyaa inuu yahay goolhayaha goolhayaha casriga ah, waxaana soo xigtay goolhayayaasha kale ee soo socda oo ah saameyn weyn iyo qaab jilane.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Issue Number of Issue
Iyadoo Parma, Buffon uu go'aansaday inuu xirto lambarka 88, halkii uu ka ahaa numberkiisii ​​hore 1, 2000-01 xilli ayaa sababay muran ka dhacay Talyaaniga.
Buffon, si kastaba ha ahaatee, ayaa sheegatay inuusan ka warqabin farqiga neo-Nazi ee nambarada, isagoo sheegay in 88 ay u taagan tahay "afar kubbood", taas oo ah calaamado muujinaya dabeecadda iyo sifooyinka qofka. Waxa uu sheegay in loo maleynayo in ay u muujinayaan baahidiisa sifooyinkaas ka dib dhaawiciisa ka hor Euro 2000 iyo in ay sidoo kale matalaan "dib u dhalasho".
Waxa uu ku soo bandhigay lambarrada, Doorashada lambarka kooxda 77.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Khatarta Xabsiyada Xabsiga
2000, Buffon wuxuu halis ugu jirey afar sano oo xarig ah oo lagu soo oogay shahaadada xisaabaadka dugsiga sare si uu ugu diiwaangaliyo shahaadada sharciga ee Jaamacadda Parma.
Wuxuu bixiyay ganaax 3,500 euro 2001. Waxa uu mar dambe ku sharraxay dhacdada sida uu uga xumaaday.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Sharciga sharci darrada ah
On 12 May 2006, inta lagu jiro dhererka Calciopoli fadeexad, Buffon ayaa lagu eedeeyay inuu si sharci darro ah u sharaxan yahay kulamada Serie A, taasoo markii hore ka dhigtay booskiisa xulka qaranka ee 2006 World Cup.
Buffon si rasmi ah ayaa su'aalo loo waydiiyay waxaana uu qirtay inuu soo galiyay ciyaaraha isboortiga. Sababtoo ah isaga ayaa ah in ciyaartoyda kubadda cagta laga mamnuucay inay ka faa'ideystaan ​​tan iyo bishii October 2005. Buffon waxaa laga nadiifiyay dhamaanba eedeymaha loo soo jeediyay December 2006.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Siyaasadda Cayaarta
7 May 2012, Buffon waxaa loo doortay madaxweyne ku xigeenka xiriirka kubada cagta Talyaaniga (AIC). Tani waa markii ugu horeysay ee ciyaaryahan kubada cagta ah uu heysto booskan.
Sanadkaas, Buffon ayaa ku biiray "Ixtiraamka Kala duwanaanta" Barnaamijka, iyada oo loo marayo UEFA, oo loola jeedo in lagula dagaallamo midabtakoor, takoorid iyo dulqaadka kubada cagta.
Gianluigi Buffon Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Hormaris
Gianluigi Buffon ayaa saadaaliyay mustaqbal ifaya oo uu ka heli karo ninka ay isku wadanka yihiin Gianluigi Donnarumma oo isna leh magac la mid ah kan. Goolhayaha kooxda AC Milan Donnarumma ayaa noqon kara wiilkayga "Ayuu yiri Gianluigi Buffon.
Waxa ay noqotay raadiye caan ah oo internetka ah sida goolhayaha AC Milan uu la xiriirinayo Buffon.
Sida laga soo xigtay goolhayaha AC Milan ... "Waxaan heystaa xiriir wanaagsan oo la leh Gigi. Wuxuu had iyo jeer i siiyaa talo, waxaan iila dhaqmaa sida walaalkiis xitaa adoo wadaagaya magaca isla markaana aan la xiriirin. Waan haystaa isku dayay si aan u daawado tallaabo kasta oo uu ku sameeyo tababarka waxaan u mahadnaqayaa isaga oo ah geesinimo ii. Qof kastaa wuxuu leeyahay waxaan ahay Giriiga wiilka, wiilkiisa ama walaalkiis. Isla markiiba waxaan diirada saari doonaa kaliya Milan waana ku fiicneyn halkaan, sida ay tahay kooxda Waxaan taageerayay tan iyo markii aan ilmo ahaa. Waxaan horeyba u joogay koox sarre. "
Waxaan ku dadaalnaa saxnaanta iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, nala soo xiriir!
Sheekada Carruurnimada Alessandro Bastoni Plus Xaqiiqda Untold Biography
Daniele Rugani Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Federico Chiesa iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Lorenzo Pellegrini oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Domenico Berardi Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Gianluigi Donnarumma Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'
Moise Kean Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Nicolo Zaniolo Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Andrea Belotti Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Giorgio Chiellini Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawirka
Lorenzo Insigne Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Mario Balotelli Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Daniele De Rossi Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer